Wararka Maanta: Axad, Sept 15, 2013-Shirkad laga leeyahay Dalka Turkiga oo Maanta lagu Wareejinayo Maamulka Garoonka Diyaaradaha Magaalada Muqdisho
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya, C/llaahi Ciilmooge Xirsi ayaa sheegay in kala wareegga shirkadahani uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin howlaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
“Howsha kala wareegga ah waxay bilaabatay 3:00 galabnimo ee shalay oo Sabti ahayd, waxayna ku ekeyd 9:00 aroornimo ee saaka oo Axad ah; wax saameyn ahna kuma yeelan howlaha garoonka diyaaradaha,” ayuu ku yiri wasiirku hadal uu warbaahinta siiyay kaddib kulan uu la qaaday xubno ka tirsan madaxda labada shirkadood.
Shirkadda Turkiga laga leeyahay ayaa waxay sheegtay inay horumarin weyn ku sameyn doonto garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, iyagoo horraantii bishan keensaday qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen, waxaana SKA ay xalay bilowday in qalabkeeda ay garoonka kala baxdo.
Garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa wuxuu haatan noqday mid ay ku soo degi karaan diyaaradaha caalamiga ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin Air Uganda iyo Turksih Airlines, iyadoo sidoo kale ay yimaadaan shirkado kale oo caalami ah.
Bishii Juun ee sannadkan ayay golaha wasiirradu meel mariyeen heshiiska lala galay shirkadda Turkiga laga leeyahay ee FAVORI LLC, iyadoo tan iyo xilligaas ay soo socdeen qorshayaasha ay kula wareegayso garoonka.